Otu ụgbọ elu LATAM na-etinye akwụkwọ ugbu a atụmatụ nhazigharị n'isi nke 11
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Otu ụgbọ elu LATAM na-etinye akwụkwọ ugbu a atụmatụ nhazigharị n'isi nke 11
LATAM Airlines Group SA na ndị mmekọ ya na Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, na United States taa kwupụtara ntinye akwụkwọ nke Plan of Reorganization ("Atụmatụ"), nke na-egosipụta ụzọ na-aga n'ihu maka otu ahụ ịpụ na isi nke 11. na nrube isi n'iwu US na Chile. Atụmatụ a na-esonyere Nkwekọrịta Nkwado Nhazigharị (RSA) yana otu nne na nna Ad Hoc Group, nke bụ otu ndị nbinye ego kachasị na-enweghị nchekwa n'okwu ikpe 11 ndị a, yana ụfọdụ ndị nwe oke LATAM.
RSA na-edekọ nkwekọrịta n'etiti LATAM, ndị a kpọtụrụ aha n'elu nke ihe karịrị 70% nke nne na nna na-ejighị n'aka na ndị nwere ihe dịka 48% nke 2024 na 2026 US Notes, na ụfọdụ ndị na-eketa òkè na-ejide ihe karịrị 50% nke nha nha nhata, dabere na mmezu nke akwụkwọ doro anya site n'aka ndị otu na ịnweta nkwado ụlọ ọrụ site n'aka ndị nwe oke ahụ. Dị ka ha na-eme n'oge usoro ahụ, ụlọ ọrụ niile na-aga n'ihu na-arụ ọrụ dị ka ọnọdụ njem na ikike ikike.
"Afọ abụọ gara aga bụ ihe isi ike gburugburu ụwa - anyị enweela ndị enyi na ezinụlọ, ndị ọrụ ibe na ndị anyị hụrụ n'anya. Ma anyị agbagotela dịka ụgbọ elu na njem zuru ụwa ọnụ ebutere na nkwụsị nke ọma site na nsogbu kachasị ukwuu nke chere ụlọ ọrụ anyị ihu. Ọ bụ ezie na usoro anyị agwụchabeghị, anyị erutela nnukwu ihe dị mkpa n'ụzọ nke ọdịnihu ego siri ike, "Roberto Alvo, Chief Executive Officer nke LATAM Airlines Group SA kwuru "Anyị nwere ekele maka ndị otu ndị bịarutere na tebụl site na ya. usoro nkwuputa siri ike iji nweta nsonaazụ a, nke na-enye nlebara anya bara uru nye ndị niile metụtara yana usoro na-agbaso ma iwu US na Chile. Ntinye ha nke nnukwu ego ọhụrụ n'ime azụmahịa anyị bụ ihe akaebe maka nkwado na nkwenye ha na atụmanya anyị dị ogologo oge. Anyị nwere ekele maka ndị otu ahụ pụrụ iche na LATAM bụ ndị gbochiri ejighị n'aka nke afọ abụọ gara aga wee nyere azụmahịa anyị aka ịnọgide na-arụ ọrụ ma na-ejere ndị ahịa anyị ozi n'enweghị nsogbu dịka o kwere mee."
Atụmatụ ahụ na-atụ aro ntinye nke ijeri $ 8.19 n'ime otu ahụ site na ngwakọta nke nha nha ọhụrụ, ndetu na-agbanwe agbanwe, na ụgwọ, nke ga-eme ka otu ahụ pụọ n'Isi nke 11 na nnukwu ego kwesịrị ekwesị iji mebie atụmatụ azụmahịa ya. Mgbe ọ pụtara, LATAM na-atụ anya na ọ ga-enwe ngụkọta ụgwọ nke ihe dị ka ijeri $7.26 ijeri na ego ruru ijeri $1. Ndị otu ahụ ekpebiela na nke a bụ ibu ụgwọ na-agbanwe agbanwe na oke mmiri kwesịrị ekwesị n'ime oge na-aga n'ihu na-ejighị n'aka maka ụgbọ elu zuru ụwa ọnụ ma ga-eme ka otu ahụ dịkwuo mma.
N'ezie, atụmatụ a na-akọwapụta na:
• Mgbe nkwenye nke atụmatụ a, otu ahụ na-ezube ịmalite onyinye ikike nha nha nha nha $800, ghere oghe nye ndị niile na-eketa òkè LATAM dị ka ikike ha nwere n'okpuru iwu Chile dị na ya, na nkwado zuru oke site n'aka ndị ọzọ na-ekere òkè na RSA, n'okpuru mmezu nke akwụkwọ doro anya na, gbasara ndị na-eketa azụ azụ, nnata nkwado ụlọ ọrụ;
• LATAM ga-enye ọkwa atọ dị iche iche nke akwụkwọ ndetu, nke a ga-ebu ụzọ nye ndị nwe oke LATAM. Ruo n'ókè nke ndị na-eketa òkè LATAM na-edeghị aha n'oge ikike ikike ikike dị iche iche:
o A ga-enye ụfọdụ ndị nbinye ego n'ozuzu na-enweghị nchekwa nke ndị nne na nna LATAM na nhazi (dación en pago) nke nkwupụta ha kwere n'okpuru atụmatụ a klaasị A;
o Ndị na-ekenye òkè ndị a kpọtụrụ aha n'elu ga-edebanye aha ma zụta akwụkwọ ndetu mgbanwe klaasị B; na
o A ga-enye ụfọdụ ndị nbinye ego n'ozuzu na-enweghị nchekwa klaasị C maka nchikota ego ọhụrụ na LATAM yana mezie ihe ha na-ekwu, dabere n'ụfọdụ oke na njide azụ site n'otu nkwụghachi azụ.
• Ya mere, a ga-enye akwụkwọ ndetu ndị nwere ike ịgbanwe agbanwe nke klaasị B na C, kpam kpam ma ọ bụ n'akụkụ ụfọdụ, na-atụle ntinye ego ọhụrụ maka mkpokọta mkpokọta ihe dị ka ijeri $4.64 nke ndị otu RSA kwụsịrị n'ụzọ zuru ezu, dabere na nnata nke ụlọ ọrụ ahụ. ndị na-eketa azụ azụ nke nkwado ụlọ ọrụ;
• LATAM ga-ebuli $500 nde ụlọ ọrụ kredit ọhụrụ na-atụgharị na ihe dị ka ijeri $2.25 na mkpokọta ụgwọ ụgwọ ego ọhụrụ, nke gụnyere ma ọ bụ mbinye oge ọhụrụ ma ọ bụ agbụ ọhụrụ; na
• Ndị otu ahụ jikwa ma na-ezube iji usoro nke isi iri na otu iji megharịa ma ọ bụ megharịa ụgwọ mgbazinye tupu ịrịọ arịrịọ nke otu, ụlọ ọrụ kredit na-agbanwe agbanwe, na akụrụngwa akụrụngwa mapụtara.
A na-atụ anya na a ga-eme ikpe ahụ iji kwado ntozu nke nkwupụta nkwupụta isi nke 11 na ịkwado usoro ịtụ vootu na Jenụwarị 2022, yana oge a kapịrị ọnụ dabere na kalenda Ụlọikpe. Ọ bụrụ na akwadoro nkwupụta nkwupụta ahụ, otu a ga-amalite ịrịọ arịrịọ n'oge ha ga-achọ nkwado nke Atụmatụ n'aka ndị ji ụgwọ. LATAM na-arịọ arịrịọ ahụ iji kwado atụmatụ a ga-eme na Maachị 2022.
Maka ozi ndị ọzọ, LATAM emepụtala webụsaịtị a raara nye: www.LATAMreorganizacion.com, ebe ndị nwere oke nwere ike ịhụ ozi ndị ọzọ bụ isi gbasara ọkwa a. Ndị otu ahụ ewepụtakwala oku ekwentị maka ajụjụ metụtara Isi nke 11, nke enwere ike ịnweta na:
• (929) 955-3449 ma ọ bụ (877) 606-3609 (US na Canada)
O nwekwara email raara onwe ya nye maka ajụjụ gbasara nhazigharị na [email protected]
A na-adụ ọdụ LATAM na usoro a site n'aka Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP na Claro & Cia. dị ka ndị ndụmọdụ gbasara iwu, FTI Consulting dị ka onye ndụmọdụ gbasara ego, yana ndị mmekọ PJT dị ka onye na-ahụ maka itinye ego.
Ndị nne na nna Ad Hoc Group, bụ nke isii Street, Strategic Value Partners, na Sculptor Capital na-eduzi, bụ ndị Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, Bofill Escobar Silva, na Coeymans, Edwards, Poblete & Dittborn dị ka ndị ndụmọdụ gbasara iwu na Evercore dị ka ntinye ego. onye ọrụ ụlọ akụ.
Ndị na-eketa òkè a kpọtụrụ aha n'elu gụnyere (a) Delta Air Lines, Inc., nke Davis Polk & Wardwell LLP nyere ndụmọdụ, Barros & Errázuriz Abogados, na Perella Weinberg Partners LP dị ka onye ndụmọdụ gbasara iwu na onye na-ahụ maka itinye ego, (b) Cueto Group na Eblen. Group, 2 dụrụ ọdụ site na Wachtell, Lipton, Rosen & Katz na Cuatrecasas dị ka ndụmọdụ gbasara iwu, yana (c) Qatar Airways Investment (UK) Ltd., nke Alston & Bird LLP, Carey Abrogados, na HSBC gwara ya dị ka onye ndụmọdụ gbasara iwu na onye na-ahụ maka itinye ego. . Greenhill & Co., LLC na ASSET Chile, SA na-adụ ụfọdụ n'ime ndị nwe oke a ndụmọdụ n'ikike nke onwe ha dịka ndị ndụmọdụ nkwado ego.
Daniel Pimental ekwu, sị:
Ọnwa Iri na Abụọ 2, 2021 na 05:23
Chọgharịa ihe ngwọta multidisciplinary anyị nwere maka ihe ịma aka gị siri ike na ohere. Ọ bụ ezie na steeti ndị mmadụ n'otu n'otu na United States nwere iwu na-achịkwa mmekọrịta dị n'etiti ndị ji ụgwọ na ndị ji ha ụgwọ, iwu insolvency.